Ita 5-7 Zuva Rokuzvipa Zuva reChitfish • Yurie BSF
Yurie | 7 Sea, 2019 | Catfish Feed | 0 mashoko
Chii Chinoita Kuti Uve Wako 5-7 Day Catfish Feed Zuva?
Iwe iwe, mucheki wekambisi, kudya kunonyanya kukosha kuti catfish yako iwedzere. Kudyisa kunofanirwa kuonekwa sekutangira kubva pachikafu chechifish larva. Zvechokwadi, nokuda kwezera re5-7 catfish zuva mashizha haafaniri kudyidzwa nokuti kune zvimwe zvekudya zvezvakangoita nenzira ye micro-zvisikwa zvatakaita mugomba. Zvisinei, zvinogoneka kuti rimwe zuva chikafu chechisikigo chichabuda, saka unoda kuipa zvakare. Nzira yekuita yako catfish kudya kumba iwe unogona kushandiswa nyore nyore, uye zvokudya zvinenge zvakafanana neFBF mabuva, pasiworms, uye nenyuchi yemvura. Pasi apa ichakurukurwa pamusoro pekurima mauto makuru madutu/maggot BSF chekudya kwekambani, kukura kwevhuvhu hwechikafu chekudya, uye kukura kwemahombekombe mumvura.
Maggot BSF / Maggot anobhururuka mauto mashoma ane zita rezvesayenzi hertemia illucens imwe yemhando inobhururuka inowanikwa munzvimbo dzakawanda uko kune zvinhu zvakasikwa zvinokonzerwa nemhando dzakawanda yemiriwo inorasirwa nevatengesi kana varimi, nokuti havakwanise kugadzirisa zvinodiwa zvekutengesa.
Bhuku rinonzi BSF Maggot iri nyore kwazvo kukudziridza nokuti hupenyu hwayo hunoenderera mberi huchitenderera. Nezvo zvishandiso zvishandiso uye zvigadzirwa, mari shoma, uye haitore nzvimbo yakawanda, iwe unogona kutokura maggotti BSF yemhuka yako yekudyisa. Iyi inotevera nzira maggotti hondo huru inobhururuka nyore.
Nzira yekuwana mazai eBFF
Iwe unogona kuwana maBAFF mazai nekuita musanganiswa wezvigadzirwa kubva kumarara emichero kana michero yakawanda yakasarudzwa. Usarega miriwo nemichero kusanganiswa nechingwa chakasara kana mhuka dzinokonzera mhuka nokuti unokwanisa kukoka nhunzi dzemagetsi kana dzimba dzinobhururuka kuisa mazai ipapo. Saka iwe unofanira kushamba mishonga nemichero kutanga.
Zvadaro musanganiswa wezvigadzirwa zvinosungirwa mumudziyo usingatauri kujekesa kwezuva. Mumazuva e7-10, maggot bsf akatova mumashumo atakasika kare. Kana zvakafanana neizvi, tinogona kuwedzera chikafu chekudya kana kuti zvasara kuitira kuti bgb bff ive yakagwinya uye izere nemuviri kuitira kuti painova dendere inogona kurarama kwenguva yakareba, yakaroorana, uye inobereka zviuru zvemazai.
Nhanho inotevera tinoita cage yekurima kwegorosi iyi inogona kuitwa nemambure eparanet kana mambure emumuchu. Denga racho rinofanirawo kuve rakagadziriswa kuitira kuti chiedza chezuva chigone kupinda. Nekukura kwegorosi zvichienderana nenzvimbo yakange iripo tinongogadzirisa. BSF yakavharwa izvi zvinofanira kuzarurirwa kune zuva panguva shoma 2 / 3 maawa zvichabva zviri nani kuona maziso mangwanani, nekuda kwekukosha kwezuva rino re BSF.
BSF fly kwete kudya munguva yehupenyu hwake kungozvinwa kuitira kuti tigone kuwedzera shuga yeBFF simba, kazhinji BSF ichabatana kwenguva yakareba 2-3 zuva rakatevera mushure mazai mushure mekuiswa BSF ichafa mangwana.
Bhodhi yeFBF inobvisa mhizha inogadzirwa nehove yekudya iyo inoputirwa nemvura inopisa kuitira kuti chinangwa chakanaka uye chinogona kupedza 3 zuva risina chigadzirwa, ita kuti hove iyi yehove isati ichitsvaga pakati pemvura inenge ichiisa musanganiswa mumudziyo mushure mokutora mazai matsva on it
Kana mazai ari mumakadhibhodi aigona kuiswa zvakananga apo izvo zvakagadzirwa zvinogona kuiswa muhombodo yeMinetal mvura yekutanga kutanga kuisa pamashandiro ekuvhara mhirizhonga Ivhara chiganda nemucheka uye musunge tirabhu kana tambo, mazai e BSF achapedza mukati mezuva re3.
Mushure mevhiki imwechete yezera haigone kuendeswa kumapepanhau ekuwedzera, zvakadai seakanyorwa pamusoro apa kubva pamichero yemiriwo nezvakadaro. Izvi zvinokwaniswa kukohwa panguva ipi zvayo zvichienderana nezvinodiwa. Kana iwe uchida kuita kuti mwana wacho asvike kutema uye mashizha / asvike kubva kune vhidhiyo, tinoiunganidza uye tinoisa maharareji kuti aise mazai zvakare.
Kupa Catfish Kudya ne BSG Maggot
Kana uchida kudya catfish makore 5-7 mazuva ane BSF maggot, unogona kutora 1kg BSF maggotti emakumbo ndokubva uvaura kana kuaparadza mu blender. Iwe unogonawo kuwedzera chirongwa chekurovedza maitiro ezvokurapa kune zvakaparadzwa maggot. Mushure mokuparadzwa iwe unogona kuapa iyo catfish yako iyo ichiri mazuva 5-7.
Catfish Inodyisa Nyikaworm
Nyikaworms rudzi rwemhuka inorarama muvhu, ine muviri wakatsvuka uye wakatsvuka. Nyikaworms chete inodya kudya kwezvisikwa muvhu rakafa uye rakafa. Mazuva ano, zvipembenene zvevhu zvinotanga kukura nekuda kwezvavanogona.
Nyikaworms kubva kumhuri Lumbricidae uye Megascolicidae uye vanobva genus Perionyx, Diplocardi, Lidrillus, Lumbricus, Eria, naPeretima iye zvino vazhinji vanogadzirwa nevanhu. Zvichakadaro, boka repasi rinokurudzirwa zvikuru neruzhinji rwemazuva ano rune mutsa Lumbricus Pheretima, uye Periony . I3 mhando dzevhu dzesango dzinodyarwa nevarimi ava dzinonakidza zvinhu zvakasikwa.
Iyi inotevera nzira yekukudziridza pasiworms for catfish feed.
Zvivako uye Zvigadzirwa Kugadzirira
Mheji dzinogona kuwanikwa kubva kune zvigadzirwa zvisingadhuri uye zviri nyore kuwana zvakadai semapuranga akasara, mbatya, michindwe yemichindwe, zvinyorwa uye matanda evhu. Kuti igare rekusingaperi, guru remuenzaniso rine ukuru hwe2x18m uye urefu hwe0.5m. Mukati mawo mune nzvimbo yekuchengetedza yakadai semapuranga akawanda, uye cage inogona kuvhurwa pasina rusvingo
Mhando dzehurongwa hwekurima hunogona kushandiswa dzinosanganisira mabhokisi akavharwa, mabheji akabatanidzwa, mitsetse yakakoswa uye mikoko yakawanda yehove.
Kugadzirira kwekurimwa kwenyika ndeye:
Kupa mbeu dzakakwirira
gadzirira mapeji emagetsi uye masvingo ekudzivirira
Tsvaga mbeu dzinobva kumasikirwo kana kuti iwe unogona kuzviwana pasi pemombe yakadururirwa iyo ichiri pasi.
Iyo yimbi ndeye 2.5 m kureba ne 1 m, uye 0.5 m nekukwirira, inogona kugadzirisa zvipembenene zvakapoteredza muswe 10.000.
Kuparadzaniswa kwemadumbu maduku uye makuru / maduku uye mahonye
Kuchengetwa mazai kusvikira vasvika mapapiro ehonye, ​​mushure mokunge vakura, pakarepo uvaparadzanise kune imwe nzvimbo.
Kuparadzanisa zvihonye zvevanhu vakuru
Kupa Catfish Kudya neWorldworms
Iwe unogona kupa zvipembenene zvakananga zviripo zvemazuva 0-5, kana uwandu hwepasi pasi hukuru kwazvo kune catfish mrubha, unogona kuiparadza kuburikidza nokuhuputira. Ipa zvakafanana ne2 kakawanda pazuva mangwanani nemanheru.
Nhengo dzemvura Inopa Catfish
Muchiri wemvura mhuka duku dzinogara mumvura uye dzinosanganisira zooplankton. Huwandu hukuru hwemuviri hunosvika 0.2-6 mm. Mvura inoshandiswa inokurudzirwa kuti ipe nyama chaiyo yekudyisa kana ichiri mhuva. nzira yekurima nayo zvakare iri nyore. Iyi inotevera nzira yekugadzirisa mvura mumvura.
cabbage / potato mashizha
chigadziko / aquarium
Itai mbiriso yechingwa (fermipan) yechina yeiji yepuniki mumvura
tsvongodza kusvikira yaparara
funganisai kabichi / mazhizha emapatato ayo akapwanyika (kwete kunyanya)
siya iyo ye3 pazuva kuitira kuti microbes / protozoa iwedzere
shandisa gorosi kuitira kuti uwandu hweokisijeni mumvura huchengetedzwe
mushure mokunge 3 pazuva, tinokwanisa kuisa mbeu inobereka mbeu
Kubatsirwa kwekushandisa mbiriso sekudya ndiko kuti inowanikwa nyore nyore uye haina kuoma kana ichigadzirira tsika.
Kupa Catfish Kudya neMvura Lice
Zvimwe zvinenge zvadzadzwa nemucheka wemvura zvinogona kudururwa zvakananga kune catfish larva pool, kufudza mvura inopisa inogadziriswa kune zvinodikanwa zvekudya kwechirwere. Kwete kunyanya uye kwete kunyanya kuduku.
Iko kune mhando mitatu yemhuka inogona kushandiswa pakudya nyama yekambani 5-7 mazuva. Tariro kuti ichave yakakosha kune shamwari dzose.